Beyond all you are mine (MG) – Hakanto Contemporary (MG)
Beyond all you are mine (MG)
Fampirantiana manomboka ny 27 Febroary hatramin’ny 4 Septambra 2021
Manoloana an’izao rehetra izao, ahy ianao.
Fanambarana feno hafaliana manoloana ny ho avy manjavozavo. Hatraiza ny fetra! Hanao ahoana ny ampitso?
Fanambarana velona, amin’ny fotoana manempotra. Hatao ahoana ny hiaina? Miaraka amin’iza?
Sakaiza azo hitokiana eo anatrehan’ny tontolo marefo. Hiara handihy ve isika indray andro any? Hifanoroka?
Fitiavana mihatrika fitiavan-tanindrazana diderena.
Mpanakanto telo no manambara fa mbola tafaraka, feno aingam-panahy ary velona hatrany isika.
Isika no manefy ny fotoana ary mihoatra ny faravodilanitra rehetra ny faniriantsika.
Ny voalohany dia hery malagasy. Temandrota.
Mikirakira ny tany, mamolavola ny afo, manorotoro ny fontsika hanako feo vao.
Amin’ny alalan’ny Kolondoy no anoritany faritany vaovao, kianja filalaovana hiarahan-tsika miatrika ny fanontaniana rahampitso sy ny filan-tsika anaty.
avy any Bosphore mandalo ny moron’ny Ikopa,
ry zareo :mentalKLINIK izay mampanjavozavo ny fitsipiky ny lalao eo amin’ny materialy, ny fahazavana ary ny fihetseham-po.
Tsy misy jeografia ankoatry ny fahatsapana.
Ny hevitry ny 2, ny 3 na mihoatra… Ny mpifankatia :mentalKLINIK dia manasa antsika hametra-panontaniana momba ny fitiavana vaovao ary indrindra ilay fitiavana an’Antananarivo. Another Love.
Ary ny fahatelo,
Rina Ralay Ranaivo izay mizara ny fony eo anelanelan’Antananarivo, Berlin sy ny toerana hafa,
dia miantso amin’ny alalan’ny Chapitre I, ny nofinofy, ny razana ary ny tantara manamorona renirano tsy hita maso hiampitana.
Miampita rano indray, miampita fotoana, miampita ny hafa, miampita sisintany,
Hifankahita indray ary hanamafy fa manoloana an’izao rehetra izao, ahy ianao.
Faniriana ny hitoetra eo amin’ny tontolo,
Hisosa safoin’ny rivotra,
NISOKATRA NY 09 OKTOBRA 2021
HATRAMIN’NY 16 MARSA 2022
Alhambra Gallery . Rihana faharoa
Toy ny fanao ato amin’ny Hakanto Contemporary rehefa manao fampirantiana efa ho roa taona izao,
mametra-panontaniana foana izahay mahakasika ny zava-misy, ny Tantara, ny ankehitriny ary miandrandra ny ho avy ihany koa.
Amin’ity andiany ity, tsy mivaona amin’izay fanao, dia hiresaka manodidina
ny tanindrazana – ny firenena – ny tany izahay.
Ny lasa, ny ankehitriny, ny ho avy, ireo hatrany no gadona handrindrana ity feo vaovao ity.
Resahina matetika ity tanintsika lazaina fa Nosy mena ity, ampahan-tany anilan’ny Afrika, afovoan’ny ranomasim-be sy izao tontolo izao.
Isika izay avy amin’ny Ranomasimbe, araka ny fanambaran’i Serge Henri Rodin azy.
Ny ranomasina manodidina azy, mitoetra ho misitery hatrany.
Fanambarana ? Fametraham-panontaniana ? Fitiavana ? Elanelana ? Fahaleovantena ?
Tsy ny hanome vahaolana no ifantohana eto, fa kosa ny handrafitra fahatsapana amin’ny alalan’ny fampivondronana fahaiza-manao.
Fihetsika tsy miloko, hatramin’ny fisiana saina tsy misy loko.
Fo voatritra mba ahafahana mandraraka ny ranomaintin’ny fanantenana.
Kalom-pitia mitraotra avy amin’ny tonombavaka.
Na ihany koa sakafo mitam-pihavanana, afomanga manoloana ireo ratrantsika.
Maro no mety ho valiny. Mety ho amin’ny alalan’ny resaka, indraindray fifanandrinana, na koa disadisa.
Fanehom-pitiavana Ny fitiavanay
Indro misy fanehom-pitiavana marolafy ataon’ny mpanakanto malagasy 26 ho an’ity nosy malala ity.
26 miresaka an’izay 60 taona izay.
60 taona nahaleo tena.
Ahoana ny handrafetana ny ankehitriny manoloana ity fankalazana ity ? Ahoana no hamborahana ny tantara ? Hanoratana indray ireo tantara. Ahoana no hitantaràna ny ho avy ?
Manoratra indray ny tantara
Miverina manoratra ny lasa
Manolo ny faka
Ary dia manangana, manangana, manangana hatrany.
Feo re moramora manako mamelombelona ny fo sy fanahy ao anaty fahalalahana.
Eny, andao resahina fa fotoanany izao.
– Joël Andrianomearisoa . Septambra 2021
Hiram-pirenanan’i Madagasikara nanomboka tamin’ny 1958
Tonony . Pastora Rahajason
Feo . Norbert Raharisoa
Sarin’i Viviane Rakotoarivony